Izinto zokwakha zeGypsum kanye ne-putty - iDivenland
I-putty engahambelani namanzi yezindonga ezingaphakathi, i-putty eguquguqukayo yezindonga ezingaphandle
Izingqimba ezintathu zenziwe lapho kupenda isakhiwo: udonga, ungqimba lwe-putty nohlaka lokupenda. Njengengqimba encanyana yodaka, udaka lusebenza njengokusekelwa kwezendlalelo ezingaphezulu nezingaphansi. I-putty enhle ayigcini nje ngokuqhekeka kokugcotshwa kwekhonkrithi nokugoqa ungqimba wokupenda, kodwa futhi inika isiphetho esibushelelezi nesinamthungo odongeni. Ingasetshenziswa futhi ngezinjongo zokuhlobisa nokusebenza. Ama-ether e-cellulose ahlinzeka i-putty nesikhathi esanele sokusebenza futhi aqinisekisa ukumanziswa, ukuphinda kubuye futhi bushelelezi be-substrate. Ukugoqeka kwe-Batch, kepha futhi kufanele kwenziwe ukuthi i-putty ibe nokusebenza okuhle kakhulu kwebhondi, ukuguquguquka, ukuqina, njll.
I-Max cellulose ether inganciphisa kakhulu ukuxabana ku-powder eyomile ngenkathi kuxutshwa namanzi, okwenza ukuxubeka kube lula futhi kusindise nesikhathi sokuxuba. Izakhiwo ezinhle kakhulu zokubamba amanzi zehlisa kakhulu inani lamanzi elimunceke odongeni, okuthe ngakolunye uhlangothi kuqinisekisa umphumela wokusula okhanyayo nobushelelezi. Indwangu yejeli inesikhathi esanele sokufaka i-hydrate, okugcina kuthuthukisa amandla e-bond futhi ngakolunye uhlangothi, iqinisekise ukuthi abasebenzi bangabeka udonga amahlandla ambalwa. Ukugoqana kwe-Batch; i-cellulose ether eguquliwe, noma kumazinga okushisa aphezulu, kepha igcina amanzi amahle, ilungele izindawo zasehlobo noma ezishisayo. ukwakhiwa; futhi kwandisa kakhulu inani lamanzi adingekayo entweni ye-putty, ethi ngakolunye uhlangothi ithuthukise ukusebenza kwe-putty ngemuva kokuthi isetshenzisiwe odongeni, kanti ngakolunye uhlangothi, ingaba Ukwandisa indawo yokumboza ye-putty kwenza ifomula ibe ukonga ngokwengeziwe.
Izinto zokwakha ezenzelwe i-Gypsum
Uhlelo lodonga olususelwa kwi-Gypsum luyisebezi odongeni olusebenzayo. Isebenzisa i-gypsum njengezinto ze-gel, ngaleyondlela ixazulule kahle uchungechunge lwezinkinga ezinjengokugoqa nokuqhekeka, okukhona ezintweni zokwenziwa usimende ezenzelwe ukwakhiwa. Ukusetshenziswa kokwakhiwa kwemishini akugcini nje ngokuthuthukisa ukusebenza kahle, kepha futhi kuqinisekisa ikhwalithi yephrojekthi. I-Gypsum luhlobo lwezinto zokwakha ezakha ama-micropores amakhulu kokuqukethwe ngemuva kokulapha, futhi idlala indima ebaluleke kakhulu ekuhlobiseni ingaphakathi lesimanje. Emkhiqizweni osuselwa ku-gypsum, ama-ethers we-cellulose adlala indima ebalulekile kuzo zombili izilinganiso zezimbotshana namakholomu.
Ayizweli ebuchosheni be-gypsum futhi ingangena ngokushesha emikhiqizweni ye-gypsum ngaphandle kwe-agglomeration, engenalo ithonya elibi ekungeneni kwemikhiqizo ye-gypsum ephulukisiwe; indawo yayo enhle ebambe amanzi ingagcina amanzi ngodaka, kuyilapho i-gypsum iqiniswe ngokuphelele; ukunamathela okufanelekile okumanzi kuqinisekisa amandla okubopha izinto ku-substrate, okuthuthukisa kakhulu ukusebenza kokwakhiwa kwemikhiqizo ye-gypsum, futhi kulula ukusabalala ngaphandle kokunamathela kummese; ukusebenza kahle kokulwa nokugeleza kwayo kuvumela umakhi ukuthi afake izingqimba ezinkulu ngaphandle kokubanga ukwanda; ngenani elinqunyelwe lodaka olomile, ukutholakala kwe-cellulose ether kungaveza ivolumu eshisayo efudumele.
Amabhulokhi amasha wokuzifaka ngokwanele
UKWAKHIWA KWESIMEMO SOKUGCINA KUQALWA
Amabhulokhi amasha wokuzifaka wezinhlayiya ahlanganiswa amabhlokhi amakhulu omzimba, ungqimba lwangaphandle lokufudumeza lokushisa, isembozo sokufakwayo esingumgogodla, isendlalelo sokuzivikela nokholamu wokuxhuma we-thermal. Phakathi kwezindonga ezingaphakathi nezangaphandle zesivimba esikhulu somzimba, phakathi kwekhambi eliyinhloko lomzimba kanye nesendlalelo sokuvikela sangaphandle, ngokusebenzisa "izimbambo zokuxhuma okwenziwe nge-T-point" nangokuthi "ngokusebenzisa ungqimba lokufaka". I- "pin pin" ihlanganiswe iyonke, futhi izintambo zensimbi zifakiwe kuphini. Ngaphansi kwesisekelo sokuqinisekisa ukuphepha, kunganciphisa umphumela obandayo webhuloho futhi kunokusebenza okuhle kakhulu kokufakwa kwe-thermal.
1 、 Kuhle kakhulu ukusebenza kwe-insulation insulin kanye nokulinganiselwa kokusebenza kwezindleko.
2, kunciphisa kakhulu ukukhiqizwa kwemifantu nodonga, kuthuthukisa kakhulu ikhwalithi yephrojekthi
3, Hlakulela wokwakha esishunyekiwe, kakhulu ukwandisa amandla wokwakha